Ukuphila komuntu kuhlukaniswa nokuphila kwezilwane ezihlukahlukene nezinambuzane. Kodwa ngokuvamile kwenzeka ukuthi ezinye izinto eziphilayo ziyimvelo izinambuzane kanye nomonakalo. Indlela yokubhekana nabo?
Ngokuvamile, yizinambuzane eziletha umonakalo omkhulu engadini kanye nensimu yomuntu. Ziyizilwane ezidliwayo, azidli izithelo nezitshalo kuphela, zilimaza, kodwa futhi zinambuzane eziwusizo. Kumele uqaphele ukuthi njengoba akekho omunye wezilwane zasendle ongakwazi ukumelana nama-wasps, kumuntu okwenzayo. Ungathola ukuthi ungenza kanjani ugibe lwamazinambuzane. Ukwenza lokhu, udinga kuphela ibhodlela leplastiki lamabili, ummese wokubhala , oyisitshalo esikhulu kanye nentambo. Ibhodlela ngokwayo lihlukaniswe izingxenye ezimbili ukuze phansi kukhulu kakhulu kunaphezulu. Intamo iphendulwa futhi ifakwe emgodini phansi. Emaphethelweni ebhodlela phezulu ahlelwe nomuntu othakazelisayo. I-thread noma intambo iyadingeka ukuze ubambe isicupho, isibonelo, esihlahleni. Konke okusele ukuthulula amanzi phansi, kuxubene noshukela noma uju. Uma kuseduze kukhona izinyosi zezinyosi, phucula amanzi kangcono ngeviniga. Ama-waveps asabela ngayo ngendlela efunayo.
Indlela yokwenza ugibe ekhaya ngezinhlanzi? Ungasebenzisa isimiso esifanayo nanjengomgibe ku-wasps. Khona-ke kungcono ukuthi uthathe isitsha sepulasitiki somthamo omkhulu, isibonelo ibhodlela elingu-5 litre. Inhlanzi izobhukuda phakathi phakathi kwentambo, bese iphuma ngaphandle nje.
Iseluleko esiwusizo siyoba nendlela yokwenza ugibe lwezimpukane ekhaya. Phela, lezi zinambuzane ehlobo zivame ukucasula abantu. Ngakho-ke, ungenza amateyipu akhethekile. Ukuze wenze lokhu, udinga amaphuzu wephepha, futhi njengamathele ungathatha amafutha, i- rosin noma i- pine resin, njenge-bait - uju. Ibhuku lokugeza amanzi lincibilikisa amagremu angu-300 e-rosin, exutshwe ngamafutha angama-flaxse (200 amagremu) kanye nama-gramu angu-60 uju. Le nhlanganisela isetshenziselwa ithempulethi yamaphepha futhi imiswe esilingeni.
Indlela yokwenza umgibe wegundane? Kukhona izinketho eziningana. Owokuqala kubo kungenzeka ukuthi ulula. Kuyadingeka ukuthatha imbiza engamamitha amahlanu bese uyibeka entanyeni phansi, ngakolunye uhlangothi uqhubekele ngemali. Ngaphakathi kwesitsha, ungafaka ucezu lwamafutha njengesilwane. Isicupho sesilungile! Indlela elandelayo yokwenza ugibe lwamagundane. Lokhu kuzodinga ibhodlela le-2 litre. Udinga ukusika phezulu phezulu nentamo, futhi kusukela ezansi yenza izicucu ezibukeka njengezikhala ezibukhali ezizophola ngaphakathi. Phakathi nendawo ye-mousetrap udinga ukubeka i-bait. Kubalulekile ukuthi ungakhohlwa ukushiya umgodi ukuze igundane lingene ngaphakathi. Yilokho konke. Isilwane, ukungena phakathi kwe-can, asikwazi ukuphuma kuso, ngoba Iziphetho ezibukhali zizophazamisa nalokhu. Futhi okunye okukhethwa kukho kokwenza isicupho ngokwakho nge-rodent encane. Ngakho-ke, udinga ukuthatha ibhakede eliphezulu futhi uphephe emaphepheni angasese noma amathawula wephepha. Kusukela kulolu roll, udinga ukwenza i-groove (okokuqala uyinqume ibe izingxenye ezimbili, bese uyihlanganisa ndawonye eceleni kwetheyipu), ebeka emaphethelweni etafuleni ukuze uhlangothi lapho uhlaziyo lukhona khona emoyeni. Igundane lizohamba libheke bese liwela ibhakede, elizobe likhona ngqo ngaphansi komugudu. Futhi kusukela ebhakede elide alikwazi nje ukuphuma.